Anigu waxaan ahay gabar 13-sanno jir ah qoyskaygana waxay doonayaan in ay “gudniin igu sameeyaan”. Anigu waan cabsanayaa. Qoyskaygu ma maqlayaan warkayga. Qofkeen la hadli karaa? – Tips for refugees
Previous Previous post: Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah gabadhii saaxiibtayda ahaydna way iga tagtay. Laakiin dhab ahaantii aad ayaan isku jeclayn. Anigu ma aqbali karo kala-tageena. Aad ayay ii dhaawacaysaa. Sidaas darteeda inta baddan waan kadaba galaa iskuulka kadib waxaana isku dayaa in aan dib usoo ceshto. Shalay waxay ii sheegtay in aan la ii oggolayn in aan sidaasi sameeyo. Midaasi sax miyaa?
Next Next post: Anigu waxaan ahay gabar jirta-14-sanno waxaana maqlay in gabdho kale oo iskuulka dhigta ay sameeyeen tallaalka HPV. Maxay tahay midaasi? Anigana miyaan u baahanahay?